Kahle abakhethiwe jeans isitayela uyakwazi zibukeke wenze noma yiziphi sibalo sabasincane iqine. Abantu ne sibukeke ejwayelekile cishe awunankinga kukhethwa ibhulukwe, kodwa labo ekwakheni imingcele zehluke ejwayelekile, musa njalo bazi ukuthi ukukhetha jeans for sibalo sowesifazane. Okulandelayo, uzofunda yini okumelwe siyibheke lapho ukhetha isihloko intandokazi kwabaningi ikhabethe.
Ukukhethwa uhlobo izibalo
imodeli ngamunye jeans e izibalo ezahlukene ubukeka ezahlukene. Ngokwesibonelo, jini ibhulukwe ne okhalweni okusezingeni eliphezulu nentombazane kuhlobisa, kodwa uhlobo olufanayo ngakolunye iyohlala ezimbi kakhulu. Ukuze ugweme amaphutha ezinjalo, kubalulekile ukuba ukukhethwa izingubo asondele umthwalo ukwazi nokuqonda izinhlobo bobunjwa ebalungele.
Kunezinhlobo ezimbili eziyisisekelo bobunjwa:
Awuqinisekile ukuthi kanjani ukukhetha jeans ku figure zhenschine- "apula"? Umehluko yalolu hlobo ukuthi engxenyeni engenhla zibukeke kubonakale phansi emikhulu. Amantombazane lesi sibalo umphongolo encane, izinqulu ewumngcingo, imilenze emide emincane futhi egcwele round esiswini. Kulokhu, okuthandayo kufanele anikezwe imodeli ngqo jeans nge kloshem encane yesizwe. Njengoba zokutshala, kungcono uyeke ukukhetha ngokwesilinganiso, okuzokwenza ukumboza indawo esiswini, esikhundleni sokwenza ku ngendlela ehlukile.
Umgomo oyinhloko - ukugcizelela Ukuvumelana imilenze lusichezukise kude esiswini.
Futhi abanikazi izibalo "Apple" kufanele sinake amamodeli etholakala ezinqulwini kancane iyincane ezansi. Kuvunyelwe inguqulo selithi ibhulukwe ukuba igqoke nge High Heels.
uhlobo umzimba "ipheya"
Ngakusasa owande ijamo - eliphakathi kwe. Lichaza ukuthi ongaboni okhalweni ebanzi kuka emahlombe. Umsebenzi oyinhloko abanikazi izibalo ezifana ukuthi badinga ukufeza ukulingana ngezabelo, okungukuthi ukulinganisela phezulu kanye phansi. Ngakho-ke, lapha kubalulekile ukuba umthwalo endaweni hip - kuyodingeka ukuba ayiyeke le imodeli yokukhanya umbala patch emaphaketheni.
An isixazululo esihle kakhulu "ipheya" ukuma kukhona jeans Skinny, kancane kwenyuka kwedolo. Le modeli kuzodala ukulinganisela okufanele phakathi kwamahlombe bese okhalweni, futhi uma ibhulukwe kukhona ngisho ne isikhundla zihlalo okusezingeni eliphezulu, izogcizelela okhalweni ukunikeza ukubukeka isifazane.
inketho Landelayo - Jeans Straight nge isilinganiso okhalweni ukuphakama. Bona zibukeke bude imilenze futhi zingabonisi ngalé side iyonke. Ithanda, khetha imodeli shades amnyama. By the way, izimiso ezifanayo kumele isetshenziswe uma kukhona umbuzo: kanjani ukukhetha jeans for sibalo sowesimame engu-50?
Futhi imodeli yakamuva - "amasoka" kuyinto jeans besilisa cut. Umthetho main lapho ukhetha lezi jeans - hhayi ukuthatha kakhulu baggy. Samuntu ekahle ngeke ibhulukwe ngokuphinda uhlaka ukuma kancane ayisesemikhulu esinqeni podvornutye kusukela eqakaleni kuya phansi kulolu hlangothi. Umphelelisi "amasoka" kungaba uyithukulule ihembe kanye High Heels.
Sesihlole emibili owande kakhulu ukuma, kodwa kukhona abanye. Ngokulandelayo, siyowuqonda kanjani ukukhetha jeans emalini kwabesifazane ezahlukene.
Lolu hlobo sibalo uvame ukubizwa ngokuthi boyish noma ezemidlalo, njengoba kulokhu, leyo ntombazane isuke cishe ububanzi efanayo ngesikhathi ezinqulwini emahlombe, ukhalo kanye engavezwanga ngamazwi imilenze kunalokho mncane. Cishe azikho izindawo Curves njengabesifazane eziyengayo. Nokho, unxande ukuma uhlobo otholakala in izinhlobo eziningi.
Awazi uhlobo "ibhokisi" kanjani ukukhetha jeans emalini yowesifazane? Izithombe esibonisa izibonelo eziningi futhi, uma yihlaziye, kuba sobala ukuthi umgomo oyinhloko lapho ibhulukwe ngokukhetha akunika awumfanekiso nesifazane.
Ukuze abesifazane ne lolu hlobo jeans ephelele "Skinny" ukuthi ibukeke leggings noma tights. Nokho, uma phezu emaphaketheni ezingemuva kungaba Appliqué kukhanya noma umugqa, kuyoba zibukeke bandise imbongolo, okuyinto ngokuyisisekelo ukuzwakala unxande uhlobo ukuma.
Futhi, yazi model of ngalé ngqo nge kloshem okuncane kusukela nedolo ibhulukwe "amasoka", ezizohlinzeka khulula ahlabayo nomthamo okhalweni. Zama ukukhetha jeans nge waistline medium noma ephansi.
Amantombazane nge hlobo sibalo "ibhokisi" onobuhle zinakekelwa kahle kakhulu phansi kancane podvornutye, uma uvumela ukukhula. Hlanganisa konke okusemandleni abo nge enkantolo izicathulo noma izimbadada nge High Heels. Top kulesi simo kubalulekile eyolanda khulula. Ingabe ephelele ijezi oversayz, khulula ngalé ihembe noma abavamile isikibha cut ngqo.
Awuqinisekile ukuthi kanjani ukukhetha jeans emalini owesifazane izinkalo ebanzi? Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi, okungenzeka kakhulu, thina ukhuluma ngani "unxantathu." La mantombazane abe okhalweni olubanzi, imilenze egcwele, kodwa phezulu kunalokho ziyaqothuka futhi amabele amancane. Ngakho-ke, lapho sikhetha jeans ibhulukwe kubalulekile ukulinganisela ngezansi namahlombe. Nge lo msebenzi ukubhekana kahle imodeli cut iqonde nge okhalweni okusezingeni eliphezulu.
Ukuze "unxantathu" wabheka kulingana, ungazisebenzisi onobuhle, enikeza umthamo emathangeni. Khokha ngokukhethekile jeans ezinemibala egqamile, ukusikeka aqondile esimise okwembali phansi, amabhulukwe nge kloshem kusukela nedolo "amasoka" okuxekethile kokwehla phakathi.
Kodwa onobuhle ezifana "Skinny" futhi "Jeggings", kanye imibala emnyama kufanele ngokuqinile kugwenywe, bona, kunalokho, ngeke ukwaba ukungalingani sibalo.
Wena ucabange indlela ukukhetha jeans kwabesifazane sibalo we "unxantathu nabokhulumile"? It libhekene ulayini nenhle of okhalweni, okhalweni ewumngcingo, kodwa emahlombe kunalokho siye phambili. Ukuze abesifazane, lolu hlobo ngokuphelele efanelekayo isitayela cut khulula nge waistline ongaphakeme, kuzokwenza ongaboni okhalweni ebanzi, futhi umfanekiso lizofuna obunobunye.
Abanikazi abe semqoka kangaka ibhekwa njengeBhayibheli isifazane kakhulu, basuke elinesimo waistline mncane, izinqulu kahle ichazwe futhi libanjwe okunethezeka. Lokho efanelekayo, futhi kanjani ukukhetha jeans kwabesifazane ngohlobo sibalo we "hourglass"? La mantombazane abagqoka ngokuphepha jeans, kwenyuka kwedolo, kumele ngokucophelela asheshe futhi kube okuxekethile kancane ezansi, ukuze agcizelele ukuthi ukhalo.
Amamodeli Kunconywa "hourglass":
Pants nge okusezingeni eliphezulu zihlalo isikhundla, kwenyuka hip.
Jeans ne medium noma ukhalo ongaphakeme futhi kloshem kusukela kwedolo.
"Skins" nge okhalweni okusezingeni eliphezulu.
Ukukhetha kokwehla ibhulukwe
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukukhetha jeans for sibalo sowesifazane, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi yini okufanele ibe ukhalo, ngoba lokubikezela ngokungalungile abelethwe ezingonakalisa wonke look. Ngakho, indlela ukukhetha futhi kuyini?
Ukutshala ibhulukwe - nanti iphuzu lapho ibhande. Kuyinto phakeme, phakathi noma ephansi. Lapho ibhande kuyinto phakathi okhalweni, kungcono okusezingeni eliphezulu zihlalo isikhundla, phezu okhalweni - phansi, maphakathi elise phakathi okhalweni okhalweni.
ibhulukwe Denim ne zokutshala okusezingeni eliphezulu Kunconywa ukugqoka abanikazi okhalweni ephelele. Uma ngabe le ndawo kunenkinga, lezi ibhulukwe kuphela sikhulise kubo. Ngaphezu kwalokho, high imodeli kokwehla asifanele abesifazane ne isisindo okweqile, ngaphandle kwalabo abakufisela ngokuvamile sibalo ezinhle, nje ukungapheleli encane.
Awuqinisekile ukuthi kanjani ukukhetha jeans ku umfanekiso nenhle owesifazane yobudala? Khetha kufanelekile isilinganiso nasemlenzeni ngqo. Kuyinto indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo ukuthi kufanelekile yiluphi uhlobo ukuma, isithombe bese ibuphi ubudala. Ngakho Abaklami kakhulu ukhetha le ndlela uma udala amaqoqo zabo.
Ngokuqondene kokwehla ongaphakeme, le ndlela-ke kufanele kugwenywe cishe wonke amantombazane. Ziyisivikelo, lokhu imodeli e okhalweni, ngokulandelana, uma une ngisho ukukhubazeka kancane endaweni besisu, benza lubonakale kakhudlwana. Ngaphezu lezi jeans ayikwazi ukuhambisa ngokugcwele noma ahlale phansi ngaphandle kokukubonisa elise emhlabeni izingubo zangaphansi zabo. Ukugqoka jeans ezifana Kunconywa kuphela amantombazane nge isiqu uhlasela esifushane, kokwehla ongaphakeme idonsele ongaboni.
Awuqinisekile ukuthi kanjani ukukhetha jeans for sibalo sowesifazane kanye nosayizi? Lapho usuthole umzimba wakho uhlobo, futhi wenza imodeli ukukhetha, kubaluleke kakhulu ukuba sibe iphutha nge ubukhulu. Ukuze ukwazi ukubona ngokunembile isidingo yayo ukukala ubude imilenze, ububanzi e okhalweni, amadolo kanye okhalweni, futhi ukuphakama ukhalo. Kodwa ukuze siqonde ingabe uyafisa yini ukuthi uvumelane jeans, ngokwanele ukuba bazi kuphela ububanzi ibhande.
Kungaba isilinganiso usebenzisa amasentimitha ekhaya. Kunezinhlobo ezimbili ezahlukeneyo zokulinganisa: yokulinganisa lonke hhafu ibhande, bese uphindaphinde yi ngelesibili. Jeans lokhu kulungiselelwa kuphawulwa iledere English alfabhethi W. uhlangothi usayizi wakhe okhalweni kuboniswa (e amayintshi). Ngokwesibonelo, W37 - ibhande kuyinto 37 amayintshi (1 intshi = 2,54 cm).
Nokho, kusukela akuwona wonke ubheke ubukhulu inkampani. Ngokuyisisekelo senziwa kulabo kuphela ngokukhethekile ukukhiqizwa jeans. Izinga American atholakala ikakhulukazi (36, 38, 40 nokunye. D.) Kanye European (XS, S, M, nokunye. D.) Ubukhulu. Ukuze uqonde kubo akuyona nzima, ikakhulukazi uma ujwayele ukuthenga izingubo nge isiqu esinjalo. Futhi uma ungaqiniseki, ungabona Usayizi itafula, okuyinto cishe kuwo wonke esitolo efanelekayo.
Indlela ukukhetha ubude
Ibhulukwe obuphelele kudlala indima zincane kunalokho ububanzi ibhande imodeli. It is kulinganiswa kusukela zone weld kuya inguinal emikhonweni onqenqemeni. On the ilebula ephawulwe ngohlamvu L. Ngaphezu kwalokho, uma imodeli yakhelwe amantombazane ubude kakhulu, ulwazi olufana ephawulwe ngokwehlukile.
Uma ukhetha ubude jeans, njalo kucatshangelwe nalokho izicathulo uhlose sizigqoke kaningi, futhi ukukala kangcono lokhu isihlangu kubo. Ungakhohlwa ukuthi ngokuvumelana nemithetho noma isithende high yedwa kufanele embozwe kancane trouser umlenze (ephelele - kuze kube maphakathi), ngokulandelana, kufanele ungeze ambalwa amasentimitha nobude ecacisiwe kwilebula.
Qaphela: ungakhetha amantombazane okusezingeni eliphezulu jeans nge onqenqemeni ebomvu, ekhaya ukuwalungisa njengoba kudingeka. stylish kakhulu ukubukeka podvornutye jini ibhulukwe kuhlangene amateki, ballet emafulethini noma ngezithende.
Futhi nangu ongaphakeme amantombazane ukhethe ubude oyifunayo kunzima kakhulu kangakanani. Kulokhu-ke kubalulekile ukucabangela ukuthi podvornutye noma mfushane imilenze zibukeke kuzokhulisa ngisho kancane, uma kungekhona engeza umfanekiso izicathulo sesithende esiphezulu. Futhi kunenkolelo ukuthi amabhulukwe tight kakhulu, isibonelo, "isikhumba" ukuziqhakambisa ukukhula encane. Ngenxa yalesi sizathu, amantombazane ongaphakeme kufanele ukhetha umuntu oyisibonelo ehlezi khona lo mntwana.
Izincomo mayelana ukukhethwa eliphezulu ibhulukwe
Ukukhuluma ngendlela ukukhetha jeans kwabesifazane sibalo, akunakwenzeka ukuba uthinte phansi odabeni lokufaneleka izinga. ibhulukwe Denim, wenza lendwangu okuhle, ngeke yini wafiphaza, fade futhi uzokhathala ngokushesha. Kodwa wazi kanjani ukuthi ukuthi ngaphambi kuyinto eliphezulu jini ebonakalayo, futhi akekho alingise elula ukuthi uzolahlekelwa ezakheke emva ukuwasha?
Into esemqoka okufanele ukuba unake - ke izipikili futhi izinkinobho. Eliphezulu jeans kugcizelela ukuthi ohlangothini reverse nomkhiqizi hardware kufanele uphawu. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi okuqinile ngokuvamile "tag" imikhiqizo yayo uphawu uthunge phezu emaphaketheni labaqaphi elingemuva. I last imfanelo - a uziphu leyo ndinganiso kumele kwenziwe metal eqinile, nge double ukukhiya pawl.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukukhetha jeans for sibalo sowesifazane, futhi kanjani inombolo enkulu imifanekiso ukuthola eyodwa evumelana nawe. Khona-ke, uma uthola isitayela sakho ephelele, uyomangala ukuthi esekelwe ezinye jeans nje ukuqoqa imifanekiso eminingi stylish, kanye ukuqonda ukuthi into jikelele futhi Irreplaceable ikhabethe lakho.
Izinto ezilungile kuzo izinto ezindala
Art Nouveau izingubo: incazelo, izici kanye nokubuyekeza